ကျန်ရစ်သူ၏ နောက်ဆုံး ဆန္ဒ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ကျန်ရစ်သူ၏ နောက်ဆုံး ဆန္ဒ
ကျန်ရစ်သူ၏ နောက်ဆုံး ဆန္ဒ
Posted by စိန်ကြက်ဆင် on Sep 14, 2014 in Aha! Jokes, Satire | 20 comments
ခါတော်မီ Version 1
တော်သလင်းနေ ပုစွန်သေဆိုသည့် စကားအတိုင်း နေကား တောက်တောက် ပူနေသည်။
ရမ်းဂွဇွတ်ရွာ ရွာလည်လမ်းကား တံလျှပ်တို့ဖြင့် တညီးညီး ရွာလည်လမ်းဘေး တလျှောက် အစီအရီ ပေါက်နေသော ကြက်ဆူပင်တန်းကား နေမင်း၏ ဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံခံရန် မစွမ်းသာချေ။
အစဉ်သဖြင့် ကူးလူးစုန်ချီ အစည်စည် ဖြစ်နေတတ်သော ရမ်းဂွဇွတ်ရွာကား ယနေ့အဖို့ လွန်စွာ တိတ်ဆိတ် ခြောက်ကပ်လို့ နေသည်။
အကြောင်းမူကား ယနေ့ရွာတွင် အသုရှိလို့ နေပေသည်။ သေခြင်းတရား ဟူသည်ကား ပုထုဇဉ် လူသားတို့အတွက် မဆန်းပင်သော်ငြား ယခုအဖြစ်အပျက်ကါး ရမ်းဂွဇွတ်ရွာအတွက်မူ အတန်ငယ် ဆန်းပြားလို့ နေပေသည်။ ပြောရမည် ဆိုပါလျှင် ယနေ့သည် တရွာလုံးအတွက် ပထမဆုံးသော အသုဘပွဲ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဆန်းပြားခြင်းလော သို့မဟုတ် သေမင်း၏ ပထမဆုံး တပ်လှန့်မှု ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ပေတည်း …….။
“ခင်ခက်ခက်ခေါ” သေပြီ !!!!
သတင်းစကား စကြား ကြားချည်း ဦးကြောင်ကြီး တယောက် မည်သို့မျှ မယုံနိူင် တနေ့ကတောင် လမ်းမှတွေ့လို့ အဖြေပေးဦးလေလို့ ရိသဲ့သဲ့ ပြောမိသေးသည်။
မနက်ခင်း ဗလီက အာဇံပေးတော့ ကမန်းကတန်း ထဝတ်တက်အပီး အိမ်ရှေ့လမ်းမက အသံဗလံကြားလို့ ထအကြည့် ကိုရင်ကျောက်တို့ လူသိုက် ပေါက်တူးကိုယ်စီဖြင့် ရွာအနောက်ဘက် လျှောက်သွားတာ မြင်မိသည်။
နည်းနည်းတော့ စိတ်ထဲတမျိုးထင်မိသည်။ မကြာပါချေ ….
ရွာဆော် ကချင်ကြီး လှည့်ပတ်အော်တော့မှ သိရတော့သည်။ စစချဉ်းတော့ ကိုယ့်စိတ်ကို ဘယ်လိုမှ ဆောက်တည်ရာမရ မဟုတ်ရဘူး မယုံဘူးဟုသာ အထပ်ထပ်အခါခါ ရေရွတ်နေမိသည်။
နောက်ဆုံးတော့ ဦးကြောင်ကြီးတယောက် သေချာပိုင်နိူင်စွာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ပီး ချက်ချင်းပင် နာရေးအိမ်သို့ ထွက်လာခဲ့လေတော့သည်။
ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကား ယခုဘဝ မပိုင်ဆိုင်ရသူ ခင်ခက်ခက်ခေါကို ရေချိုးပေးရန်အတွက်ပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။
ဟုတ်ပေသည် …. ကျန်ရစ်ခဲ့သူ ဦးကြောင်ကြီး၏ နောက်ဆုံး ဆန္ဒကား ရေချိုးပေးချင် ခြင်းဖြစ်ပေသတည်းးး
နာ သေရင်တော့ ရေလာမချိုးကြနဲ့နော်။
ဂဇက် ကလူတွေ ရေလာမချိုးပါစေနဲ့လို့။
ကြောင်ကြီး လက် နဲ့ ထိရင် သေသူပြန်ရှင်သတဲ့
ဟမ်ဒါဆိုသံချောင်းပါတီဝင်ထဲ အူးကြောင်ပါသပေါ့ ခင်ခက်ခက်ခေါဘာမှာခဲ့သေးလဲ။ ဒေါ်လှတရာငုံထားဒလား မငုံထားဘူးလား ခိခိ
ဦးကြောင်က ဗမာပြည်ပြန်လာရင် အဲ့ဒီ အက်ျုးဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်မှာတဲ့
ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ.. ဒေါ်ဒေါ်ပဒုမ္မာတင်ထားတဲ့ ဖုတ်ဝင်သလိုလိုဇတ်လမ်း(အစစ်)ကို သွားဖတ်မိတာ..
နောက်ဆုံး.. ဒေါက်တာဒေါ်ပဒုမ္မာဆုံးဖြတ်ချက် သဘောကျလို့..။
ဒီနေ့ညီတော်မောင်ရန်ကုန်သွားတာ.. မှီသလောက် စတားဘတ် ကော်ဖီမှုန့် ပိစိလေးတွေ… အမတော်တို့ညီအမအတွက်.. ၂ဗူး.. ထည့်ပေးလိုက်ကြောင်း..။
ညီတော်မောင်က ကိုရင်အလင်းဆက်ဆီဆက်သွယ်လိမ့်မယ်… ဖြစ်ကြောင်း..။
ဒီနေ့မှာမှ.. အယ်လ်အေမှာမြန်မာရုပ်ရှင်ပွဲတော်လုပ်တာမို့.. အလုပ်ရှုပ်နေတာနဲ့.. ညီတော်မောင်က.. သတင်းစာပါယူသွားပေးသလားတော့ မသေချာ..
P ကျမတော့ အသိရှိနေတဲ့ လူနာလို့ပဲမြင်ပါတယ်။ထူးဆန်းတာကတော့ အစာနဲ့ရေဖြတ်ထားတာ ၅ရက်ကို မသေတာပါပဲ။ ရေက တနေ့ကို 160 စီစီပဲ ထည့်လိုက်တယ်တဲ့။ခုတော့ ကျမ Ensure ပြန်တိုက်ခိုင်းထားတယ်။ နှာခေါင်းပိုက်ကိုလည်း သူ့ယောင်္ကျားက ဖြုတ်လိုက်မိတယ်။ ရေကို ဒီတိုင်းမြိုနိုင်တာတွေ့လို့တဲ့။ဇွန်းနဲ့ နဲနဲစီ တိုက်ခိုင်းထားတယ်။ ဆေးရုံကို ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ သွားပြတော့ ဆရာဝန်က ဒါမျိုး သူတို့တွက် တွေ့နေကျဖြစ်နေလို့ စမ်းသပ်မှုတွေမလိုတော့ပါတဲ့။ မျှော်လင့်ချက်တော့မရှိလို့ပြောပါတယ်။။ ဘေးဆရာတွေ ပြကြည့်အုံးလို့ ပြောလိုက်သေးသတဲ့။
P သားသမီး ၃ယောက်နဲ့ ယောင်္ကျားက အလုပ်လုပ်နေရတာ။အခု ဒီလူနာဆေးရုံတက်ကတည်းက သမီးက အလုပ်ထွက်ပြုစုနေရတယ်။သားနဲ့ ယောင်္ကျားက ကျမဆီမှာ လုပ်တယ်။ ကိုယ်ကတော့ လိုအပ်တိုင်း အိမ်ပြန်ခွင့် အလုပ်မဆင်းခွင့်ပေးထားတာ။ဒါပေမယ့် ၀င်ငွေလျော့ ပင်ပန်းဆိုတော့ သူတို့လည်းညည်းတာပေါ့။ ဒါကြောင့်လည်း လေဖြတ်တဲ့ အဖိုးကြီး အဖွားကြီး လူနာကို လမ်းဘေးပစ်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ဖြစ်လာတာ၊ဖုတ်ဝင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ဖြစ်လာတာလို့ မြင်ပါတယ်။ကျမ တော့ လူနာကိုရော သူတို့မိသားစုကိုရော သနားမိတာပဲ။ သူတို့ကို ဖျောင့်ဖျပြီး အသက်ရှင်သရွေ့တော့ ပြုစုပါ၊တိုက်ရတဲ့ အာဟာရဖိုး ကျမပေးပါမယ်လို့ ပြောထားရတယ်။ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ ဓာတ်ပုံ တင်မရသေးလို့၊ပြချင်ပါတယ်။
P လူနာပုံပါ။ဘယ်ဖက်လက်လှုပ်လို့ရတယ်။ မျက်စိဖွင့်တယ်။မျက်တောင်ခပ်တယ်။ အသံကြားရင် ကြည့်တယ်။တံတွေးမြိုတယ်။သွေးပေါင် 100/70, နှလုံးခုန်တာ 100/min,လက်မောင်နဲ့ ခြေထောက်က ဖောယောင်နေတယ်။Bed sore အိပ်ရာနာလည်း ရနေပြီ။ကြာပြီကိုး။
ဦးကျောက် ခဲ သွေးပေါင်ရှိတယ် နှလုံးခုန်တယ်ဆိုရင်တော့ ဟိုလိုကြီးမဖြစ်လောက်ဘူး အန်တီဒုံ… ။ ကျောက်စ်တွေ့ဖူးတာက သွေးပေါင်ကိုမရှိတော့တာ… ။ သနားပါတယ် … ဝဋ်ဆင်းရဲပဲ
P ဟုတ်တယ်။လူနာလည်း ဆင်းရဲ၊လူနာရှင်လည်း စိတ်ရော ကိုယ်ရော ဒုက္ခရောက်ရတာ၊ကိုယ့်အလှည့်ကျ အဲသလို လူနာ အဖြစ် အသက်မရှင်ရပါစေနဲ့လို့ ပဲ ဆုတောင်းရတာပဲ။ သူ့သားကတော့ အမေက သူတို့သိကတည်းက ဘယ်သူ့အပေါ်မှ နှိပ်စက်တာ မရှိဖူးပါဘူးတဲ့။ ဘ၀များစွာ သံသရာဆိုတာ မပြောနိုင်တော့ ကံကြမ္မာတွေကလည်း ဆန်းကြယ်တော့တာပါပဲ။
ကွယ်..သေရင်တောင် ရေချိုးမခံဘူး…ရွာကလူတွေက .ရေချိုးပေးပြီး.လှောင်မှာ….ဟင်..နုထွားကြီးဆို…ပဲပင်ပေါက်လောက်လေးပါလား …( လက်မောင်းပြောပါတယ် ) အဲ့လိုတစိမှ အပြောမခံနိုင် …အဟိဟိဟိ …
ရှင်တုံး ချိုးမပေးလိုက်ရတာ နာသကွာ…. ဂျိတ်တညင် အတယားဖူး။
ကျွတ်စ် ကျွတ်စ် (ကျောက်စ် မဟုတ်)
ဘုရား ဘုရား ခင်ခက်ခက်ခေါ တို့ ခမျာ သေတာတောင် ကြောင်စာ ဖြစ်ရတဲ့ ဘဝ ပါလားနော်..
ကြောင်ပုဇွန်စားကျွတ်ကျွတ်ဝါးသို့ ဆိုတဲ့ အတိုင်း
မိခေါရဲ့ ညည်းခမျာသေတာတောင် ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း(စိတ်) မသေရပါလားအေ .
ကျန်ရစ်ခဲ့သူ ရဲ့ နောက်ဆုံး ဆန္ဒ တဲ့လား….
ရေမချိုးပဲ ရေနွေးလောင်းခဲ့မှ ခင်ခက်ခက်ခေါတို့ ပန်းတင်မက အကုန်သေမယ်
ဒုက္ခပဲ အသုဘတွေက ဆက်နေတယ်.. ရက်တိုက်လား မတိုက်လားပဲ စုံစမ်းရမယ်… ရက်တိုက်ရင်တော့ ကြေးကြီးတဲ့ ၀ိုင်းပဲ သွားမယ်ကွာ… (တယောက်တည်းရေရွတ်သံ…)
ဖွေးဖွေးကို မသေဂင် ရေချိုးပေးရဖို့အရေး